IPhone Cellular Ongororo Yakundikana? Heino Sei & Iyo Kugadzirisa! - Iphone
sei wont yangu yemumhanzi inoshanda
akanakisa asingagumi maseru efoni kuronga 2016
iphone 5 haibhadhare
IPhone Cellular Ongororo Yakundikana? Heino Nei & Iyo Gadzira!
Iwe haugone kufona kana kugamuchira mafoni kana kushandisa cellular data pane yako iPhone. Iwe wagamuchira chiziviso nezvema cellular kugadzirisa, asi hauna chokwadi kuti zvinorevei. Muchinyorwa chino, ndicha tsanangura nei iPhone cellular yekugadzirisa yatadza uye kukuratidza maitiro ekugadzirisa dambudziko racho zvakanaka !
Iwe Une Iyo iPhone 7?
Iyo shoma nhamba yeiyo iPhone 7 mamodheru ane chakaremara chehardware chinoita iyo Cellular Gadziriso Yakundikana ziviso kuoneka. Zvinoitawo kuti yako iPhone iratidze Hapana Sevhisi mukona yekumusoro-kuruboshwe kona yekona, kunyangwe sevhisi yeserura ichiwanikwa.
Apple inoziva nezve dambudziko iri, uye ivo vari kupa yemahara yekugadzirisa michina kana yako iPhone 7 ichikodzera. Tarisa webhusaiti yeApple ku ona kana yako iPhone 7 ichikodzera kugadziriswa kwemahara .
Kugadziriswa Kwechinguva Kune Dzimwe iPhones
Vamwe vanhu vakashuma kuti kudzima kufona kweWi-Fi uye Izwi LTE rakagadzirisa dambudziko pa iPhone yavo. Iyi zvirokwazvo haisi mhinduro yakakwana, uye iwe uchazoda kudzokera uye wotendeuka Wi-Fi Kufona uye Voice LTE kumashure mushure mekuvandudza yako iPhone kune yazvino vhezheni yeIOS.
Zvakakoshawo kuratidza kuti haazi ese anotakura waya anotsigira kufona kweWi-Fi kana Izwi LTE. Kana iwe usingaone idzi sarudzo pane yako iPhone, enda padanho rinotevera.
Vhura Zvirongwa uye tapira Cellular -> Wi-Fi Kufona . Dzima switch iripedyo ne Wi-Fi Kufona pane Iyi iPhone kudzima Kufona kweWi-Fi.
Tevere, dzokera ku Zvirongwa -> Cellular uye tapira Cellular Dhata Sarudzo . Tinya Gonesa LTE -> Dhata chete kudzima Voice LTE. Iwe uchaziva kuti Izwi LTE rakadzimwa kana bhuruu rekutarisa rikaonekwa padyo ne Data Chete .
foni yangu inoramba ichivhara uye kutangazve
Dzorera YeMhepo Ndege Kubva Nekuseri
Yako iPhone haizobatanidze kune maseru network kana Ndege Mode yakavhurwa. Dzimwe nguva kuchinja Modi yeAirplane uye kudzima zvakare kunogona kugadzirisa mashoma maseru ekubatanidza maseru.
Vhura Zvirongwa uye tinya switch padyo neMhepo Ndege kuti ubatidze. Tinya switch zvakare kuti uidzime. Iwe uchaziva kuti Ndege Mode yakadzimwa kana kana switch iri chena.
Dzorera Cellular Dhata Kubva Uye Kudzoka Pairi
Imwe nzira yekukurumidza yekugadzirisa diki maseru ekubatanidza nyaya ndeye kudzima maSeru data kudzoka uye kudzoka. Izvi hazviwanzo kushanda, asi hazvikuvadze kuedza.
Vhura Zvirongwa uye tapira Cellular . Wobva wadzvanya switch padivi peCellular Dhata kumusoro kwechiso kuti ubvise. Tinya switch zvakare kuti udzore Cellular Dhata kumashure.
vhoriyamu pane iphone isiri kushanda
Tarisa uone Yekutakura Yekugadzirisa Zvirongwa
Yekugadzirisa marongero ekugadzirisa ndeye kuburitswa kwakaburitswa newe nharembozha kana Apple kuvandudza yako iPhone kugona kubatanidza kune yako yenhare yenhare network. Zvigadziriso zvemutakuri hazviburitswe kakawanda sekuvandudzwa kweIOS, asi zvakakosha kuti ugare uchitarisa kuti uone kana imwe iripo.
Vhura Zvirongwa uye tapira About kutarisa macustomer marongero ekuvandudza. Kana iyo yekuvandudza iripo, pop-up ichaonekwa mukati memaminitsi gumi.
Tinya Kwidziridza kana marongero ekutakura aripo. Kana iyo yekuvandudza isipo, enda kunhanho inotevera.
Apple inowanzoburitsa zvidzoreso zveIOS kuti zvivunze maficha nyowani uye gadzirisa mabugs akafanana neako auri kusangana nawo izvozvi Vhura Zvirongwa uye tapira General -> Software Kwidziridza kuona kana iyo iOS yekuvandudza iripo. Tinya Dhawunirodha uye gadza kana software yekugadzirisa iripo.
Dzinga Uye Reinsert Yako SIM Kadhi
Sezvo zvisiri zvakajairika kune yako iPhone kuti iti Kwete SIM paunogamuchira iyo Cellular Gadziriso Yakundikana ziviso, iri zano rakanaka kubvisa yako SIM kadhi uye kuidzosera mukati.
Bata yako SIM kadhi ejector chishandiso kana, sezvo iwe pamwe usina imwe yeiyo, tambanudza pepa clip. Namatira ejector chishandiso kana pepa rako clip muburi mune iyo SIM kadhi tireyi kuti izarure iyo yakavhurika. Dhonza iyo SIM kadhi tireyi kudzosera yako iPhone kuti itangezve iyo SIM kadhi.
Dzorerazve Yako iPhone's Network Zvirongwa
Kugadzirisazve maratidziro enetiji kunodzima ese maCellular, Wi-Fi, Bluetooth, VPN zvigadziriso pane yako iPhone. Nekudzima ese maratidziro eneti panguva imwe chete, unogona dzimwe nguva kugadzirisa chinetso che software.
Vhura Zvirongwa uye tapira General -> Seta -> Gadziridza Network Zvirongwa . Pombi Reset Network Zvirongwa kusimbisa yako sarudzo.
Iyo DFU kudzorera ndiyo yakadzika iPhone kudzoreredza. Tambo yega yega yekodhi yakadzimwa uye kuiswazve, kuisazve yako iPhone kune zvisizvo zvefekitori.
apuro wachi nhevedzano ye3 bhatiri hupenyu
Ita shuwa iwe chengetedza backup ye iPhone yako usati waiisa muDFU modhi! Zvese zvinozadzwa unopukutwa kubva iPhone wako panguva DFU rokudzorera muitiro. Kuchengetedza backup kuchaita shuwa kuti haurase chero ako mapikicha, mavhidhiyo, uye mamwe akachengetedzwa mafaera.
Kana mese magara, tarisai yedu imwe chinyorwa kuti udzidze maitiro ekuisa yako iPhone muDFU modhi uye dzosa!
Bata Apple Kana Yako Inotakura Mutakuri
Iwe uchazoda kubata Apple kana yako isina waya inotakura kana yako iPhone ichiri kuti Cellular Ongororo Yakundikana mushure mekuisa muDFU modhi. Panogona kunge paine chakakanganisika neako iPhone's cellular modem.
Seta musangano kuApple Store yako kuti uone kana Apple tech ingakubatsira kugadzirisa dambudziko. Zvisinei, usashamisika kana Apple ikakuudza kuti utaure nemutakuri wako asina waya. Panogona kunge paine nyaya yakaoma neakaundi yako iyo inogona kugadziriswa chete nemumiriri wevashandi vemutengi wako asina waya.
Heano nhamba dzefoni dzevatengi dzevashanu vashoma vasina waya vanotakura muUnited States:
T-Nhare : 1- (877) -746-0909
Yakagadziridzwa Uye Yakagadzirira Kuenda!
Iwe wagadzirisa dambudziko pane yako iPhone uye iwe unogona kutanga kuita mafoni zvakare! Ita shuwa kuti unogovana ichi chinyorwa pasocial media kudzidzisa yako mhuri uye shamwari zvekuita kana yavo iPhone ichiti Cellular Gadziriso Yakundikana. Inzwa wakasununguka kusiya chero mimwe mibvunzo yauinayo nezve yako iPhone muchikamu chemashoko pazasi.